Chelsea Oo Sagaal Dhibcood Oo Nadiif Ah Hogaanka Ku Qabatay
HomeWararka MaantaChelsea Oo Sagaal Dhibcood Oo Nadiif Ah Hogaanka Ku Qabatay
Chelsea ayaa barbaraysay rikoodhkii ay hore u dhigtay kadib markii ay karbaashtay kooxda Crystal Palace si ay u sii xejisato kulankii 11 aad oo xidhiidh ah inay guul gaadho horyaalka Premier League, sagaal dhibcood oo nadiif ah hogaanka ku qabato.
Diego Costa ayaa u horseeday naadiga lagu naanayso the Blues guusha ciyaarta, kadib markii uu madax ku qabtay kubbad uu ka hellay Cesar Azpilicueta.
Marcos Alonso ayaa ku dhawaaday inuu u labeeyo kooxda martida ahayd, hogaanka ciyaarta, kadib markii uu birta sii qabadsiiyey kubad xanaaqad ah oo uu ka soo ganay masaafo 25 yard ah.
Palace fursadii ugu fiicnayd waxaa ka khasaariyey Jason Puncheon, kubaddii uuu madaxeeyeyna goolka ayuu la seegay.
Kooxda tabobare Antonio Conte, ee xiligaas haysta 43 da dhibcood, waxay ciyaartay kulamo ka badan kooxda kaalinta labaad ee Liverpool iyo saddexaad ee Arsenal, kuwaas oo labadooduba 34 dhibcood wada leh.
Arsenal waxay la ciyaaraysaa kooxda kaalinta afraad ee Manchester City Axada, ka hor ciyaarta Liverpool ku booqanayso Everton geggida Merseyside derby Isniinta.
Chelsea waxay sidoo kale 11 kulan oo xidhiidh ah guuleysatayintii u dhaxaysa April iyo September 2009, waxaanay ku dhawdahay rikoodhkii horyaalka Premier League, Arsenal ay 14-kulan ee guusha ah ku xidhay sanadii 2002.
CF America 1-2 Guangzhou Evergrande: Paulinho Oo Badbaadiye Noqday iyo Scolari Oo Hamiyey